Sei Kutenga Pamhepo uye Kutumira Maitiro kuri Kuchinja muna 2015 | Martech Zone
China, June 4, 2015 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Ndiri kumusoro kuChicago ku IRCE uye kunyatsonakidzwa nechiitiko ichi. Chiratidziro chakakura zvekuti handina chokwadi chekuti ndichaita kubudikidza nechiitiko chese chakapihwa mazuva mashoma andiri pano - kune makambani anoshamisa atichave kunyora nezvawo. Mhedziso yeupenzi inotarisisa pamhedzisiro yakayerwa nevaratidziri vese pano inozorodza zvakare. Dzimwe nguva pandinopinda zvimwe zviitiko zvekushambadzira, mamwe emisangano uye tarisiro inoita kunge inotsvedza kubva kumakambani ichitofanira kuwana mibairo yemari.
Nezuro ndakaenda kuUPS kubvunzana ne Gian Fulgoni, Sachigaro uye Co-muvambi weComScore uko UPS yakaburitsa yavo yegore UPS Pulse yeiyo Online Shopper (zvinyorwa izvi zvinongedzo kumusoro kurudyi) uye chidzidzo chinoratidza kuti manhamba-maviri ekuchinja mukutenga maitiro epamhepo anoramba achijairika
Pfungwa kubva kuUPS Pulse yeiyo Online Shopper
Kutenga Zvidiki uye zveMunharaunda - Nyowani muchidzidzo chegore rino, vatengi vazhinji (93%) vanotenga kune vashoma vatengesi. 61% vakatengwa munzvimbo idzi nekuti vanopa zvigadzirwa zvakasarudzika, 49% havana kuwana zvavaida kubva kuzvitoro zvechivanhu uye 40% vaida kutsigira nharaunda yebhizinesi diki.
Kutenga Global - Pamusoro pezvo, 40% yevatengi vakatenga kubva kune vatengesi vanobva kunze kweUS, iine hafu (49%) vachishuma vakaita kudaro kuti vawane mitengo iri nani, uye 35% vakati vaida zvinhu zvaisawanikwa muzvitoro zveUS.
Simba reMedia Media - Vatengi vazhinji vanobatana kune zvekutenga zviitiko kuburikidza nesocial media ne 43% vachitaura kuti vanowana zvigadzirwa zvitsva pasocial media saiti. Facebook ndiyo inonyanya kukurudzira nzira asi vatengi vanogamuchirawo nzvimbo dzinoona-dzakadai sePinterest.
Digital Commerce - Retail inoenderera ichichinja sezvo vamwe vatengi vepamhepo vachifunga kushandisa matekinoroji emagetsi muchitoro: 33% vanowana zvinyorwa zvemagetsi zvemashiripiti zvinofadza, 29% vakati vanozofunga nezvekutarisa kwenhare, uye 27% vakati vakasununguka kushandisa touch skrini kuti vagamuchire ruzivo, vatenge kana kuronga kuendesa.
Kutakurirwa mahara - Kutakura kwemahara kunoramba kuri iko kwakanyanya kukosha sarudzo panguva yekubuda maererano ne77% yevatengi vepamhepo. Vanopfuura hafu (60%) vakawedzera zvinhu kungoro yavo kuti vakwanise kutumirwa mahara. Chidzidzo ichi chinopa ruzivo rwekubatsira vatengesi kuwedzera kutengesa - 48% yevatengi vepamhepo vakati vanotumira zvinhu kuchitoro, ne45% yeavo vachiti vakaita zvekuwedzera kutenga pavanotora maodha avo.
Zvinonetsa-Mahara Zvinodzoka - Sekureva kweshumo, chete 62% yevatengi vanogutsikana neinternet yekudzosa maitiro: 67% ongorora mutemo wekudzosa wevatengesi vasati vatenga, 66% vanoda kutumira kwemahara, 58% vanoda kunetswa-pasina "hapana mibvunzo yakabvunzwa" Return mutemo, uye 47% inoda nyore-kudhinda yekudzorera chitaridzi.
Imwe Kununurwa - Kuenzaniswa nekudzidza kwegore rapfuura, vatengi vazhinji vakavhurika kuti vasarudze dzimwe nzira dzekuendesa. Muna 2014, 26% vakati vanofarira kuti mapakeji aendeswe kune dzimwe nzvimbo kunze kwekumba kwavo, gore rino yakakwira kusvika pa33% UPS iri kuyedza yega-sevhisi yekukiya pikicha mune mamwe maguta izvozvi.
Mune-Chitoro Kutora - Inenge hafu (48%) yevatengi vepamhepo vakashandisa ngarava kuchengetedza mugore rapfuura, uye 45% yeavo vatengi vakaita imwezve yekutenga pavanotora yavo yekutenga online.
Imwe yenyaya yekukurukurirana yainakidza kwandiri: vatengi chinja nzira dzekutenga pakati penhare nedesktop. Nharembozha yekushandurwa mitengo ichiri kunyanya kushomeka desktop. Inofungidzira ndeye nhare yekushandura mwero we0.5% kudesktop's 3% avhareji shanduko. Izvi hazvireve kuti mutengi ndiye kusashandura… Vanowanzochinja pakati pezviviri. Muchokwadi, VaFulgoni vakataura kuti hukuru hukuru hwekutarisa kwemafoni matsva senge iyo iPhone 6+ inogona kuve nemhosva yekuwedzera kushoma kwekushandisa kwemahara dhizaini uye mitengo yekutendeuka.
Vatengesi vanofanirwa kuramba vachienderera mberi nekushandisa kwavo nharembozha, sema38% vane nharembozha asi vasingaishandise kutenga vanoti mifananidzo yezvigadzirwa haina kukura kana kujekesa zvakakwana, uye 30% yakati zvakaoma kuenzanisa zvigadzirwa.
2015 UPS Pulse yeiyo Online Shopper chena bepa - Mumba
2015 UPS Pulse yeiyo Online Shopper infographic - Dzimba
2015 UPS Pulse yeiyo Online Shopper Executive kudzidza - Dzimba
Tags: FacebookFree deliveryonline shoppingPinterestkutumirwaups
Inoshamisa ICRE Graphic Recordings neInk Factory Studio
Ndatenda zvikuru nekugovera ruzivo urwu rwakakura uye nhamba!